Gaa na osimiri Dubrovnik | Akụkọ Njem
Susana Garcia | | Croacia, Dubrovnik, Osimiri
Dubrovnik, obodo mara mma di na mpaghara Dalmatian nke Adriatic Sea sara, nke putara maka idi ocha. Njem Dubrovnik bụ ịmata obodo ochie a ma jee ije n'okporo ámá ya, mana enwekwara ọtụtụ ndị njem nleta na-abịa mpaghara a maka oke osimiri dị egwu na ịdị ọcha nke mmiri doro anya klaasị, na-achọ ihu igwe dị mma na ebe izu ike.
Ọ bụrụ na e nwere ihe e ji mara ọtụtụ n'ime osimiri dubrovnik bụ na ọ bụghị ihe niile nwere ụdị ụdị mbipụta ájá, mana ọtụtụ bụ obere okwute mmiri, ya mere, a na-ahụkarị ndị nwere hammocks na oche. Agbanyeghị, ụsọ mmiri ya ka bụ nnukwu nkwupụta mgbe ị na-achọ njem na Dubrovnik iji nwee anwụ.
Ọ bụrụ na ị ga-aga Dubrovnik ma nọrọ na etiti ahụ, n'ezie ihe karịrị otu ụbọchị ị ga-aga ndị ama ama Banje osimiri. Ọ bụ ụsọ osimiri nke dị ntakịrị ije site na akụkụ ochie nke obodo ahụ, yabụ enwere ike ịnweta ya. O nwere uru ya, ebe ọ bụ na ọ dị nnukwu etiti ma nwee nnukwu ikuku na ndị mmadụ n'oge niile, na mgbakwunye inwe ụdị ọrụ niile. N'oge elu oge ọ nwere ikuku n'abalị. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị bụ otu n’ime ndị na-agba ọsọ site na igwe mmadụ, ọ ka mma ịgaghị aga n’akụkụ osimiri a, n’ihi na ọ bụ otu n’ime ndị ahụ juru n’ime etiti oge, ruo n’ókè nke ịbụ nke na-akarị akarị. Iji zere ìgwè mmadụ a, e nwere osimiri ndị ọzọ dị nso anyị nwere ike ịkwaga.
Buza na-eju ndị njem nleta anya n’ihi na ọ bụghị ụdị osimiri dị ka nke anyị na-agakarị, ya na aja ya. Osimiri a dị na nkume, yana eke nkume teres nke ndị mmadụ na-anọdụ ala iji nụ ụtọ ihu igwe dị mma ma mikpuo onwe ha na Adriatic na mpaghara ya dị jụụ. N'ezie, ọ dịkwa oke etiti, ebe ọ bụ na-esote mgbidi obodo Dubrovnik ma na-adị mfe ịnweta. Ọ bụkwa ebe dị mma iji nwee ọ aụ na mbara igwe n'oge anwụ na-ekpori ndụ n'oké osimiri.
Sveti Jakov abịalarị kilomita na ọkara site na Banje a ma ama, ya mere na ọ bụghị otú ahụ jupụtara. Site na ya enwere echiche dị ebube banyere mgbidi Dubrovnik na agwaetiti Lokrum, na gburugburu ebe obibi na enweghị mmekpa ahụ karịa nke osimiri ndị mepere emepe. Osimiri bụ ngwakọta nke nkume ọcha na ájá ọlaedo, ọ ga-ekwe omume ịme ọtụtụ egwuregwu, ebe ọ nwere ọtụtụ ọrụ.
Anyị na-agatụkwu, ya mere, ị ga-aga Veliki Zal, anyị ga-agbazite ụgbọ ala. Ọ dị kilomita 15 site na obodo Dubrovnik, na Brsecine. Enwekwara ike iji bọs si n’obodo ahụ rute n’obodo a, n’ime ihe karịrị ọkara awa. Osimiri a pụtara maka obere mkpuchi nke ahịhịa gbara gburugburu. Ohia nke udo di oke njo na ndi njem nleta ndi ozo di iche iche nke anyi nwere ike ichota na obodo. Agbanyeghị na ịgagharị obere, ọ bara uru ịnụ ụtọ otu ụbọchị na otu obere osimiri ndị a dị nso na Dubrovnik, ebe ọ naghị ewe oge iji rute ebe ahụ ma ọ dị mma ịma mma. O nweghi ọtụtụ ọrụ dịka ndị ọzọ ma ọ bụ nwee ike ịme ọtụtụ egwuregwu, mana na nloghachi ị ga-enwe nnukwu obi iru ala na mpaghara mara mma mara mma.
Dancegba egwu dị obere oge site na obodo ochie ma ọ bụ otu n’ime ndị izizi eji egwu osimiri. Ọ bụ nke okenye ma ọ dịkwa iche, ebe ọ bụ na ụsọ mmiri a nwere nnukwu okwute ndị na-eje ozi dị ka ebe mpụga iji zuru ike n’anyanwụ, mana ọ enweghị ụkọ aja. Na Dubrovnik, anyị ga-ahụrịrị ụdị osimiri a, ebe ha bara ụba. N'ime ọtụtụ enwere hammocks ma ọ bụ oche maka mgbazinye, ọ bụ ezie na enwere ọtụtụ ndị na-ezu ike na nkume. Ọ bụ ezie na ọ naghị adị ntụsara ahụ ka ndị ọzọ, ebe ọ bụ otu n'ime ndị kacha ochie, ọ bara uru ileta ya iji ma ọ dịkarịa ala elekere ole na ole n'ime ya wee nụ ụtọ mmiri ya dị ọcha.
Na Ala nke lapad anyị na-ahụ ọtụtụ osimiri dị iche iche kewara ekewa site na nkume, kilomita abụọ na ọkara site na obodo ochie. Ha na-aga n'ụzọ ndị ji ụkwụ aga ebe nwere ebe ntụrụndụ. Nwere ike ịga site na nke ọzọ gaa na nke ọzọ site na nkume ịhọrọ nkuku nke kachasị amasị anyị iji nọrọ jụụ ụbọchị. Dị ka n'ụsọ mmiri niile dị nso na Dubrovnik, anyị nwere ike ịnụ ụtọ mmiri dị ezigbo ọcha ma dị kristal. Ndị a bụkwa osimiri ebe ị nwere ike ịnụ ụtọ ájá, ihe a na-ahụghị na Dubrovnik niile, n'ihi ya, ọtụtụ ndị na-ahọrọ ha iji nọrọ jụụ ma nwee obi iru ala.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Osimiri » Gaa na osimiri nke Dubrovnik
Ngwa 5 ga - enyere gị aka ịhazi njem gị